राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा ९७ प्रतिशत मत खस्यो, नतिजा आजै आउने - Sidha News
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा ९७ प्रतिशत मत खस्यो, नतिजा आजै आउने
राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनको बिहीबार भएको मतदानमा ९७.४० प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
मकवानपुरको हेटौंडास्थित भुटनदेवी उच्चमाविको प्राङ्गणमा बिहान ९ बजेदेखि मतदान सुरु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले दिएकाे दिउँसो ३ बजेसम्मको समयमा ९७.४० प्रतिशत अर्थात् ३३८ मत खसेको छ। यो सँगै मतदानको समय सकिएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले ४ जना प्रदेश सांसद र ५ जना स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निर्धारित समयमा मतदान गर्न नआएको जानकारी दिए।
प्रदेश सांसदतर्फ १०९ र स्थानीय तहका २३८ मतदाता गरी कुल मतदाता ३४७ छन्।
तर ९ जना मतदाता उपस्थित भएनन्। त्यसमध्ये विवेकशील साझाका ३ जनाले मतदान नै नगर्ने घाेषणा गरेका थिए।
११० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा दोलखाका सांसद पशुपति चौलागाईंको गत साता निधन भएपछि प्रदेश सभातर्फ १०९ मतदाता रहेका थिए।
अब सर्वदलीय बैठक राखेर केही घण्टापछि नै मतगणना सुरु गर्ने उनले बताए। नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापाले माओवादी पार्टी परित्याग गरेपछि रिक्त रहेको स्थानमा सो उपनिर्वाचन भएको हो। निर्वाचनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट थापा नै उम्मेदवार छन् भने एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका तर्फबाट डा. खिमलाल देवकोटाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।
उनलाई नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको साथ छ। माओवादीले डा. देवकोटालाई मतदान गर्न ह्विप नै लगाएको थियो । यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)बाट कृष्णबहादुर तामाङले उम्मेदवारी दिएका छन्। आजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।